Vaovao - Fampiharana sy toetra mampiavaka ny sivana duplex
Ny sivana duplex dia antsoina koa hoe sivana duplex switching. Izy io dia vita amin'ny sivana vy tsy misy fangarony roa. Manana tombony maro izy io, toy ny firafitra novelomina sy mirindra, fahombiazan'ny famehezana tsara, fahaizany mivezivezy matanjaka, fandidiana tsotra, sns. Izy io dia fitaovana sivana misy tanjona marobe miaraka amina rindrambaiko midadasika sy mora ampifanarahana. Manokana, ny mety amin'ny fivoahan'ny paosin'ny sivana dia kely, izay afaka miantoka ny marina ny filtration, ary afaka manolo haingana ny kitapo sivana, ary ny filtration amin'ny ankapobeny dia tsy misy fanjifana ara-materialy, ka mihena ny vidin'ny asa. Ny sivana duplex dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, izay misy barila roa. Izy io dia rafitra vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Voalamina ny velarana anatiny sy ivelany, ary ny tampony dia misy valizy vent, mba hahafahana mamoaka gazy mandritra ny fiasana. Ny fantson-tsolika dia mandray fifandraisana mitambatra. Aorian'ny fitsapana hydraulic 0.3MPa, malefaka ny switch akoho avy any ivelany. Ny fitaovana dia manana rafitra matevina, fandidiana mety ary fikojakojana tsotra.
Ny sivana roa sosona dia ampiasaina amin'ny fanodinana fanafody nentim-paharazana sinoa, fitsaboana tandrefana, ranom-boankazo, ranom-boankazo, ronono, zava-pisotro ary ranon-javatra hafa
Karazan-maloto matevina na koloidera roa no voasivana, ary ny sivana roa kosa ampiasaina mifandimby, izay azo diovina tsy ajanona ny masinina.
Ny tambajotra dia ampiasaina tsy tapaka.
Ity masinina ity dia manana fanokafana haingana, fanidiana haingana, fanaparitahana haingana, fanadiovana haingana, fanivanana haingana be sosona, faritra kely amin'ny gorodona ary misy vokany tsara.
Ity milina ity dia afaka mampiasa filtration press pressure na pump suction suction.
Ny fefy sivana amin'ity milina ity dia karazana marindrano, miaraka amin'ny fihenan'ny latsaka sy ny fametahana ny sosona sivana ary ny rano sisa tavela. Raha ampitahaina amin'ny press sivana marindrano, dia nitombo 50% ny fahombiazany.
3. Fitaovana ampiasaina
Ny fitambarana fitaovana rehetra dia vita amin'ny vy vy.
Fisafidianana ny efijery: (1) lamba famaohana vy (2) lamba sivana (3) taratasy sivana amin'ny alàlan'ny masinina mba hampisarahana ny fampiatoana, azonao atao ny mahazo ny ranoka mazava na fitaovana matevina. Mifanaraka amin'ny lalànan'ny fitsaboana sy ny fahadiovana ara-tsakafo ary mifanaraka amin'ny fenitra GMP.